အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် Orlistat: ဘယ်လိုအစာရှောင်ပယ်ရှားဆီဥကိုယူနိုင်မလဲ?
1 ။ Orlistat ဆိုတာဘာလဲ?
2 ။ ကျွန်ုပ်တို့ကဘယ်သူတွေလဲ?
3 ။ Orlistat ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ,
4 ။ အဘယ်သို့ငါ Orlistat ယူသင့်သလဲ
5 ။ Orlistat ယူပြီးနေချိန်မှာအဘယျသို့ရှောင်ရှားရန်,
6 ။ ငါ့အဘို့ Orlistat ညာဘက်လား?
7 ။ Orlistat သုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ?
8 ။ Orlistat ယူပြီး၏ဘေးထွက်ဘာတွေလဲ?
9 ။ Orlistat, Sibutramine နှင့် Lorcaserin အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
10 ။ အဆိုပါ Orlistat ရလဒ်များကိုထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုမူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါသလား
11 ။ Orlistat အကြောင်းကိုအရေးကြီး infomations
12 ။ အပြီးသတ်သည်
အဘယ်သူမျှမကိစ္စမည်မျှ ကိုယ်အလေးချိန်ထုတ်ကုန် Orlistat သင်တို့အဘို့အသစ်တစ်ခုအရုဏ်ဖြစ်ဖို့သက်သေပြပါလိမ့်မယ်, မအောင်မြင်ပါဘူး။ သငျသညျ, သငျသညျ it.Orlistat အကြောင်းပိုမိုသိရန်ရရှိမည်ယနေ့တန်ပြန်ကျော်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာကို orlistat အံ့သြခဲ့ပြီးပြီဆိုပါက အကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေး လူအစာရှောင်အလေးချိန် tolose ကူညီမှုပေးပါသည်။ တချို့သက်သေအထောက်အထားစေချင်သလား? ပြုမိလေ့လာရေးသင် Orlistat ကိုအသုံးပြုဖို့တခါ, သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဦးတည်း dieting သည့်အခါထက်ပိုကိုယ်အလေးချိန်မညျဖွစျကွောငျးပြသခဲ့ကြသည်။ သင်ဆဲ Orlistat ယူရှိမရှိအပေါ်သံသယရှိနေလျှင်, ငါသင် Orlistat အကျိုးကျေးဇူးများကို, Orlistat ရလဒ်များကိုအဘယ်မှာ Orlistat ကိုဝယ်ခြင်းငှါသင်အစောပိုင်းကအကြောင်းကိုသိတယ်ဆန္ဒရှိလိမ့်မယ်အကြောင်းပိုမိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။ သင်ဤအံ့ဖွယ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. လူသိများပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်ကသင့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ခရီးအတွက်အဓိကဆေးဝါးကြောင်းကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်။
ကြှနျုပျတို့မှာ Phcoker.com, Orlistat အပါအဝင်တက်ကြွဆေးဝါးအလယ်အလတ်နှင့်ထုတ်ကုန်များဖြန့်ဖြူး, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အတူဆကျဆံတဲ့တရုတ်-based စီးပွားရေးလုပ်ငန်း။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတှငျကြှနျုပျတို့ကြိုးစားခဲ့ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောလယ်ကွင်းထဲကနေလူတွေစမ်းသပ်ပြီး, အကောင်းဆုံးသောငှားရမ်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်အောင်မြင်မှုဟာသူတို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးနှင့်ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်များကအကြောင်းကိုယူဆောင်သည်။ တစ်ဦးအဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ကျနော်တို့မကြာခဏလေ့ကျင့်ရေး, လမ်းညွှန်နှင့်နည်းပြမှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပြုစုပျိုးထောင်ရန်ခက်ခဲကြိုးစားကြသည်။ ငါတို့သည်လည်းသူတို့ကိုတုံ့ပြန်ချက်ပေးနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုဆက်သွယ်ရေးများအတွက်လုံလောက်သော tools များဆက်ကပ်။
ကျနော်တို့စျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးထုတ်ကုန်ကိုဆက်ကပ်။ သငျသညျကိုအကြှနျုပျတို့မှဝယ်ယူရန်ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး; သငျသညျကိုသူတို့ဘယ်လောက်တတ်နိုင်မှာအံ့သြဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် legit ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သူတို့ကရည်ရွယ်ချက်အစေခံပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာငါတို့ရှိသမျှသည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးဆိုတဲ့အချက်ကိုအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်မှုစဉ်အတွင်းကြှနျုပျတို့ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ကျေနပ်ကြောင်းထုတ်ကုန်များကိုသေချာစေရန်အားလုံးစည်းမျဉ်းများနှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများကိုလိုက်နာ။
Phcoker မှာကျွန်တော်တို့ဟာဆောင်ရွက်ရန်အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်ညစ်ညူးစေကြဘူးသေချာအောင်နေဖြင့်သန့်ရှင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်စောင့်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကျနော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကအရမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုသည် client ကိုမှတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသူများထံမှကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားကြောင်းနောက်ထပ်အရာကျနော်တို့အလေးအနက်ထားဖောက်သည်တုံ့ပြန်ချက်ယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးတိုင်ကြားချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ထောက်ခံချက် Be; သင့်ရဲ့စကားသံကိုအမြဲကြိုဆိုသည်။ ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဆီကဝယ်ပါနဲ့တကမ္ဘာလုံးကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကိုခံစားရသည်။
Orlistat စာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး, ဒါဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်သင်လောင်သောအစားအစာကနေစုပ်ယူကြောင်းဆီပမာဏကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ ဒါဟာအစာအိမ်အင်ဇိုင်း lipase မှသူ့ဟာသူအလေးထားပြီးတာနဲ့အချို့အဆီမော်လီကျူး digesting သို့မဟုတ်ဖြိုကနေဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ပိတ်ဆို့အဆီပမာဏနှင့် ပတ်သက်. 25% ဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ undigested အဆီစနစ်မှတစ်ဆင့်သွားပါနှင့်စွန့်ပစ်အဖြစ်ဖယ်ထုတ်ပစ်သည်။
ဒါ့အပြင်ပြုလေ့လာမှုများကိုသင် Orlistat ယူတစ်ကြိမ်, visceral အဆီသိသိသာသာလျော့နည်းစေကြောင်းပြသပါ။ ဒီအားသာချက်ကြောင့်လေဖြတ်ခြင်း, နှလုံးရောဂါ, သွေးတိုးနှင့်2ဆီးချိုရောဂါရိုက်ထည့်ခံစားနေရပြီး၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ကျသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဘယ်သို့ငါ Orlistat ယူသင့်သလဲ
ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးထဲကအကောင်းဆုံးရရန်, သင်သည်လက်ျာလိုက်နာရန်ရှိသည် Orlistat သောက်သုံးသော။ ဆေးတောင့်ပုံစံအတွက်လာမယ့်, သငျသညျအစဉ်အမြဲတဦးတည်း pop နှင့်တနေ့သုံးကြိမ်ယူနိုင်ပါတယ်။ လိုချင်သော Orlistat ရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်, သငျသညျခကျြခငျြးဆီသို့မဟုတ်အပြီးတစ်နာရီဦးရေအများဆုံးပါဝင်သောအစာစားပြီးနောက်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်အဆီမဆံ့မပါဘူးတဲ့မုန့်ညက်လောင်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်သည်သင်၏ထိုး skip ရန်အကြံပြုပါသည်။ သင်တစ်ဦးသည်ဘောဇဉ်ကိုကျော်သွားလျှင်ဒါ့အပြင်သင်သည်လည်းဆေးထိုးလက်လွတ်သင့်ပါတယ်။
တစ်ဦးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်း, သင်ချောကျိကျိဘာဂါလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်စားရန်မလိုပါ။ ပိုလျှံအဆီနှင့်အတူအစားအစာများစားသုံးခြင်းသငျသညျမသက်မသာအစာခြေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံယူစေလိမ့်မည်။ သင် Orlistat အကျိုးကျေးဇူးများကိုတွေ့ကြုံခံစားချင်လျှင်, သင်အနိမ့်အဆီနို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များနှင့်အသား၏ပိန်ကြုံဖြတ်တောက်မှုလောင်သင့်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အဆီ၏ 30% ထက်ပိုသောမုန့်ညက်မသွားလာရင်းဇုန်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတစ်နေ့လျှင် 1000 ကယ်လိုရီယူလျှင်ဥပမာ, သူတို့ထဲက 330 ထက်မပိုဆီ၏ပုံစံအတွက်ဖြစ်သင့်သည်။
သင်လမ်းမှန်ပေါ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေပါ, သင်တိုင်းမုန့်ညက်အတွက်ယူရှိသမျှကိုအဆီခြေရာခံစောင့်ရှောက်လော့။ သင်ဤမည်သို့ပြုကြသနည်း သင်လောင်ရိက္ခာရှိသမျှပစ္စည်းများကိုပေါ်တံဆိပ်များကိုဖတ်ရှုကြောင်းသေချာပါစေ။ သငျသညျယူစားသုံးခြင်း၏နံပါတ်မှသတိထားရမှာအသုံးပြုပုံသင်အလွယ်တကူသင်သည်ယူပါလိမ့်မယ်အဆီပမာဏကိုတွက်ချက်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာ Diet plan ကိုအတူတက်လာမယ့်စိတ်ဝင်စားခဲ့လျှင်, တစ်ဦး dietician, အာဟာရတိုင်ပင်သို့မဟုတ်ဆရာဝန်သင်ကူညီနိုင်ဘူး။ သင်က SARMs ဝယ်ယူခြင်းမပြုမီသိထားပါရှိရမည်အရာအားလုံးကို
သငျသညျကိုသတိပြုပါရန်လိုအပ်ကြောင်းနောက်ထပ်အရာကဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆီဥကို-blocking ဂုဏ်သတ္တိများကောင်ဆီဥကိုတွင်ပျော်ဝင်နေသောဗီတာမင်ကိုစုပ်ယူရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နိုင်ခြင်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်တစ်ချို့တဲ့ရှိခြင်းကနေသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူကုသမှုအပေါ် K သည်, အီး, D, တစ်ဦးနှင့် beta-carotene စဉ်ရှိသည်နေ့စဉ် multivitamin ယူပါ။ ယူ multivitamin ရဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားကိုသိရန်, သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်မှပြောနေတာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာ Orlistat နှင့်ဤဗီတာမင်မယူသင့်ပါတယ်။ ဆေးယူပြီးရှေ့တော်၌ထိုဗီတာမင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောနာရီကိုယူပါ။
တစ်ဦးထိုးပျောက်ဆုံးရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်ကဖြစ်ပျက်လျှင်သို့သော်စိတ်မပူပါနဲ့, မသင့်; ဖြစ်နိုင် soonest ယူပါ။ ယင်း၏အတိတ်တစ်နာရီလျှင်သင်စားကတည်းကယင်းလွဲချော်ထိုးတာကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်စီစဉ်ထားအဖြစ်လာမယ့်ယူပါ။ တစ်ဦးလွဲချော်ထိုးတက်သည်အောင်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူအပိုဆေးပညာယူစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဘူး။ သင်ကိုယ်တိုင်အဆိပ်သင့်စေတက်အဆုံးသတ်ပေလိမ့်မည်။
တစ်ခါတစ်ရံသင်သာအစာစားခြင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်သို့မဟုတ်အသီးအပွတပ်မက်ထဲကရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီ fatless မုန့်ညက်ခံစားမရှိစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိ၏ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံးဘောဇဉ်ပြီးနောက် Orlistat ထိုးလက်လွတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကပိုမိုမြင့်မား Orlistat သောက်သုံးသောသငျသညျအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးကိုမပေးပါဘူး။ အဲဒီအစားသူကသင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဖျက်ဆီးပါသညျနိုင်ဘူး။ အမှု၌သင်တို့ကိုအကြံပြုထိုးထက်ပိုယူ, သင်ပုံမှန်အတိုင်းအစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်း-related ဆိုးကျိုးများတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကမစင်ထဲမှာ inconstinence, အဆီပြန်မစင်, ဝမ်းဗိုက်ဒုက္ခဆင်းရဲ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ဝမ်းလျှော, အန်ခြင်း, ပျို့ဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးက high-အဆီမုန့်ညက် စား. တစ်ဦး Orlistat အလွန်အကျွံသုံးစွဲကိုယူလျှင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပြင်းထန်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ Orlistat ကုသမှုအပေါ်များမှာပြီးတာနဲ့သင်ကအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုယူပြီးကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတစ်ဦးအလွန်မြင့်မားသောအဆီသည်ဘောဇဉ်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အူတွေနဲ့အစာအိမ်အပေါ်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီရှောင်ရှားဘို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်သည်မည်သည့်အဆီစားသုံးရှောင်ရှားမဆိုလိုပါ; ဤနေရာတွင်သင်လောင်အဆီပမာဏကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပုံပေါ်အကြံပေးချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
သင်တစ်ဦးအနိမ့်အဆီထမင်းချက်-in ကိုငံပြာရည်ငံပြာရည်၏5ဂရမ်နှုန်းအဆီထက်လျော့နည်း 100 ဂရမ်ရှိကြောင်းသုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ဥပမာအနိမ့်အဆီန့်, လျှော့ချ-အဆီဒိန်ခဲ, အနိမ့်ကယ်လိုရီဒိန်ချဉ်များနှင့်အနိမ့်အဆီနို့ထွက်အစားအစာများ, အဘို့အသွားနို့, skimmed သို့မဟုတ် Semi-အကြမ်းဖျဉ်းဖတ်။
ချက်ပြုတ်သည့်အခါအဆီဖြည့်စွက်ရှောင်ကြဉ်ပါ, အစား, သင်, မုန့်ဖုတ် microwave ခိုးယူနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်သို့မဟုတ်ကင်နိုင်ဘူး။
ကြက်သားအသားအရေနှင့်ဝက်သားပေါ် crackling စားသုံးရှောင်ကြဉ်ပါ။ သငျသညျအစားအသား၏ပိန်ကြုံဖြတ်တောက်မှုဘို့အသွားနှင့်အဆိုမြင်နိုင်ကောင်ဆီဥကိုဖယ်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အစားကိုပုံမှန် / ထောပတ်န့်တဲ့အနိမ့်အဆီပြန့်ပွားကိုရွေးချယ်ပါ။
Cyclosporine လည်း Orlistat အတူယူမရသင့်ပါတယ်။ သင်ကယူဖို့လိုအပ်ပါက, သုံးနာရီမတိုင်မီသို့မဟုတ် Orlistat ယူပြီးနောက်မှာဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် (ထိုကဲ့သို့သော Synthroid ကဲ့သို့) Levothyroxine ဒီဆေးအပေါ်နေချိန်မှာရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ သငျသညျလေးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနာရီမတိုင်မီနှင့် Orlistat ယူပြီးပြီးနောက်ယူနိုင်ပါတယ်။
ငါ့အဘို့ Orlistat ညာဘက်လား?
သငျသညျအလေးခြိနျဆုံးရှုံးမှာရည်မှန်းထားပါသည်လျှင်ကိုယ်အလေးချိန်ဖြည့်စွက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ Dieting နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအခညျြးနှီးထင်ရပေမယ့် Orlistat ၏အသုံးပြုမှုကိုကပါဝငျတဲ့အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်ကိုအစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်လိမ့်မည်။ သငျသညျ Orlistat သုံးလျှင်ထိုသို့မဆိုလိုပေ သငျသညျထိုင်နှင့်ရလဒ်များကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ကျန်းမာတဲ့အစာစားခြင်းနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းရှိခြင်းသင်ကူညီကြလိမ့်မည်ပါဝငျကွောငျးကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့အောက်ပါ အစာရှောင်ခြင်းကိုယ်အလေးချိန်.
သင် takeOrlistat မှလက်ျာဘက်အဘို့အလား? ဒါဟာအကောင်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဒါပေမယ့်ဘယ်လိုသင်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့အတှကျအခြိနျကြောင်းကိုငါသိ၏ကြဘူး။ သင်အဝလွန်နေကြသည်ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ဘယ်လိုနားလည်ပြီးတာနဲ့သင်ကကိုယ်အလေးချိန်ဆုံးရှုံးအတွက်ခြေလှမ်းယူသည့်အခါကိုသိနိုငျသညျ။ သငျသညျအဝလွန်လျှင်ပြောပြရန်စုံလင်သောလမ်းဆရာဝန်ကိုမြင်လျှင်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်နေစဉ်, အနည်းငယ်အညွှန်းကိန်းကိုသင်လိုင်းကူးတော့မယ်ဆိုရင်သင်ပြောပြကူညီနိုင်ဘူး။ သင်တစ်ဦး Wakeup ခေါ်ဆိုခပေးနိုင်ကြောင်းပထမဦးဆုံးအရာမြင့်မားနေသည်ဟု BMI ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ BMI အရေအတွက်ကမီတာနှစ်ထပ်သို့မဟုတ်အမြင့်နှုန်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်သျှူးများ၏အလေးချိန်ကိုပြသညွှန်ပြ။ လျှပ်တပြက်အတွင်း, သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း (BMI) အဆင်ပြေသည်ဖြစ်စေဆုံးဖြတ်ရန်သင့်ရဲ့အမြင့်နှင့်အလေးချိန်စစ်ဆေးနိုင်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ BMI 18.5-24.9 အကယ်. 25-29.9 ၏သငျသညျအဝလွန်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြနေချိန်တွင်, ကပုံမှန်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်။
သငျသညျအဝလွန်နေကြသည်ရှိမရှိ သိ. နောက်ထပ်ကောင်းသောလမ်းသည်သင်၏ခါးလုံးပတ်တိုင်းတာဖွငျ့ဖွစျသညျ။ လူတို့သညျတှငျအမြိုးသမီးအတွက် 35 လက်မသို့မဟုတ် 40 လက်မထက်ပိုမိုမြင့်မားကြောင်းတစ်ခါးလုံးပတ်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ချေါဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်တစ်ချိန်ကသင်အလွန်အကျွံဗိုက်အဆီရှိသည် ဖြစ်. , ဇီဝဖြစ်စဉ် syndrome ရောဂါ, သွေးတိုး, မြင့်သောလက်စထရောနှင့်ဆီးချိုရောဂါခံစားနေရပြီးများ၏အန္တရာယ်တိုးပွားလာဤအရပ်မှသင့်ရဲ့အရေးပါသောအကိုယ်တွင်းအင်္ဂါပတျဝနျးကငျြအဆီတွေအများကြီးရှိသေး၏။ အဆိုပါ visceral အဆီလည်းအဆိုးသင့်ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိခိုက်စေသည်ဟုအဆိပ်ထုတ်လုပ်သည်။ ဤအဓာတုပစ္စည်းတခုရဲ့ဥပမာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် cytokines ဖြစ်ပါတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုသင်လိုအပ်သမျှတစ်တိပ်အတိုင်းအတာဖြစ်တယ်, သင်အမြဲကကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ tummy အတွက်စို့ဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ, သို့သော်ဤသာသငျသညျတိရလဒ်များကိုကိုငါပေးမည်။
ကျော် 25 တစ် BMI ထားရှိခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်တစ်ဦးသည်လူသို့မဟုတ် 40 လက်မများအတွက် 35 လက်မအထက်သောခါးသငျသညျအနိမ့်ခံစားမိစေသင့်ပါဘူး။ သတငျးကောငျးကိုသငျသညျ orlistat ကိုအသုံးပြုဖို့တခါ, သင့်တဲ့အစားအစာစစ်ဆေးနှင့်သင်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သင်ထင်ထက်ပိုပေါင်သွန်းလောင်းပါလိမ့်မယ်လေ့ကျင့်ခန်းကိုစတင်ရန်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထိုအခါသင်တို့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်စတင်ပါလိမ့်မယ်, ပိုကောင်းကြောင့်သင်တို့အဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ Orlistat ရလဒ်များကိုအဖြစ်မကြာမီသင်ဆေးဝါး start အဖြစ်ကန်ကိုစတင်ပါ။
အတိတ်ကာလများတွင်ကိုယ်အလေးချိန်ဖို့လမ်းကြောင်းသင်ယူကယ်လိုရီအပေါ်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က, အခြို့အသီးသုပ်သည်ဘာဂါကိုပြောင်းမယ့်အစားတစ်ဦးကိတ်မုန့်တစ်ဦးသံပုရာဖမ်းပြီးနှင့်ဤသူတို့ကိုပေါင်တစ်ကျဆင်းခြင်းကတိပေးလိမ့်မယ်။ ယနေ့ခေတ်, သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံး cookie ကိုယူပြီးလက်လွတ်ရန်မလိုပါ, အဘယျသို့အရေးကြီးပါတယ်သင်သည်ပိုလျှံနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာယူကြဘူးသေချာနေသည် orlistat ယူ.
တစ်ဦးအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုဖြည့်စွက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်၏အစာစားချင်စိတ်ကိုဖိနှိပ်မည်မဟုတ်ပေမယ့်မှသာကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အဆီစုပ်ယူမှုကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစားသင်စားသောအစာအာဟာရပမာဏကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ထက်ကခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ကြာသောငွေပမာဏကိုပြောင်းလဲစေပါသည်။ ကိုလောင်ကောင်ဆီဥကို၏လေးပုံတစ်ပုံ၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလည်းမရှိပြီးတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏နေ့စဉ်များအတွက်စွမ်းအင်ဆည်းပူးဖို့သိမ်းထားတဲ့အတွက်အဆီအသုံးချရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေပါလိမ့်မည် လှုပ်ရှားမှုများ။
လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု regimen နှင့်ကျန်းမာသောအစားအစာအတူပေါင်းလိုက်သော, ဒီမူးယစ်ဆေးသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိရန်သင့်အားအကူအညီပေးရန်ကိုယ်အလေးချိန်ကူညီပေးပါမည်။
သင်ယုံကြည်ကိုးစားနေတဲ့ထစ်ပိုမိုမြင့်မားသွားရပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားသိသိသာသာတိုးတက်ကောင်းမွန်ပေသာ။ ပြည်သူ့မရှိတော့ကြောင့်တာမျိုးကိုရှောင်ဆီသင်မှာစိုက်ကြည့်စောင့်ရှောက်တော်မူမည် ပိုပြီးချီးမွမ်းယခုသင့်လမ်းလာပါလိမ့်မယ်။
အစာအိမ် reflux လက္ခဏာတွေ
ဒါကြောင့်သူနဲ့ဆက်စပ်2ဆီးချိုရောဂါနှင့်ပြဿနာများရိုက်ပါ
ဒါဟာသင်ပိုမိုလုံ့လရှိသူနှင့်မိုဘိုင်းစေမည်။ သငျသညျအလေးခြိနျဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးပြီပြီးတာနဲ့သင်ကဤအရပ်မှအဆစ်နှင့်ကြွက်သားအပေါ်လျော့နည်း strain လည်းမရှိလျော့နည်းအလေးချိန်ကိုသယ်ဆောင်။ သင်သည်သင်၏လှုပ်ရှားမှုများနှင့်နောက်ကျော, ခြေထောက်, ဒူးနှင့်ခြေမခံရသောဝဒေနာအတိတ်၏အရာဖြစ်လိမ့်မည်ဆောင်ရွက်ရန်ပိုမိုလုံ့လရှိသူဖြစ်လိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကိုပိုပါတယ်သင့်ရဲ့ဝမ်းတစ်ဝှမ်းကိုဆုံးရှုံးမဆိုလက်မတရာပေါင်အားဖြင့်သင့်ကိုပြန်ပေါ်ဖိအားလျော့နည်းစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Bende တော့ဘူးထားတဲ့ကုန်းတက်တာဝန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သငျသညျအချုပ်ခန်းမပါဘဲအလွယ်တကူပြုလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏အသက်ရှူနှင့်အိပ်စက်ခြင်းအချို့တိုးတက်မှုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ပိုကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်းတနေ့လုံးသင်ပိုမိုစွမ်းအင်များကူညီပေးပါမည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်, Orlistat သင့်ရဲ့အလုံးစုံကျန်းမာရေးများအတွက်မှန်သည်။
သတိထားမိဖို့ပုံမှန်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် Orlistat ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး သငျသညျကိုအသုံးပြုရန်တစ်ကြိမ်။ သင်ရုံကိုအခြားဆေးယူပြီးပြီးနောက်ကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးသို့မဟုတ်မအချို့တွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ Orlistat ၏အသုံးပြုမှုကိုအတူပါလာသောဆိုးကျိုးများအများစုဟာကသင့်ရဲ့အစာခြေစနစ်အတွင်းလည်ပတ်သောလမ်း related နေကြသည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်ပျော့ဖြစ်ကြပြီးသင်ကုသမှုကိုစတင်ပါလာသောအခါပုံမှန်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးက high-အဆီမုန့်ညက်ကိုယူပါတယ်ပြီးနောက်သူတို့ကအစဖြစ်ပျက်။ ကုသမှုဆက်လက်နှင့်လက်ျာအစားအသောက်များတွင်အောက်ပါပြီးနောက်အဖြစ်ကံကောင်းတာကသူတို့ထဲကအများစုကွာသွားပါ။
တိုင်းတဆယ်လူတဦးတည်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထက် ပို. ထိခိုက်စေသည်ဟုအများဆုံးမကြာခဏဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနေသောခေါင်းစဉ်:
သင်၏ဦးခေါင်းဝဒေနာခေါင်းကိုက်-လျှင်, သင်ကကိုလျှော့ချနိုင်ကြောင်းနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဒါဟာနာကျင်မှုသက်သာကြောင်း meds ယူပြီးပါဝင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်ဂျင်းလက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်ကိုယူပြီးကြိုးစားကြည့်နိုင်ဘူး။ သင်၏ဦးခေါင်း Massaging နှင့်အပန်းဖြေသင်နာကျင်မှုလျော့ပါးကူညီနိုင်ကျင့်။ သင်တစ်ဦးခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်းအခြားသောလမ်းနာကျင်မှုလျှော့ချဖို့ပူပြင်းတဲ့ compress သို့မဟုတ်အပူ pad ပါ အသုံးပြု. ဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု / discomfort- ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုသင်သည်မစိုးရိမ်သင့်ပါတယ်။ အမှု၌သင်သည်သင်၏ဝမ်းဗိုက်အပေါ်တစ်ဦးအပူဂျုံအိတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရေနွေးပုလင်းနေရာရွေးချယ်စေခြင်းငှါသင့်ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများထိခိုက်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်တစ်ဦးနွေးရေချိုးအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိမ်နိုင်ဘူး။ ဒီအလုပ်လုပ်မှမထင်ပါဘူးဆိုရင်, ရေ, ဥပမာရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရည်များမသောက်စမ်းပါ။
သင်ကိုယ်တိုင်သင်ပုံမှန်လုပ်ပေးထက်ပိုဝန်ကိုရှာဖွေလျှင် loo- သွားရောက်လိုအပ်ချက်တိုးလာ, သင်တို့သည်ဤမျှလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းလျစ်လျူရှုမအာမခံပါသည်။ ခေါ်ဆိုမှုလျစ်လျူရှုသာရောဂါလက္ခဏာပိုဆိုးလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာနှိုးဆော်သံဖြစ်ပေါ်စေပေမယ့်ဆက်ရှိနေသေးလျှင်, ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အာရုံကိုမရှာသင့်ပါတယ်။
အဆီပြန် discharge- သင်သည် Orlistat ကုသမှုအပေါ်များမှာပြီးတာနဲ့သင်ကသင့်ရဲ့အောက်ခံ staining သို့မဟုတ်သင့်စအိုပတ်လည်ရှိဧရိယာ damp သောခံစားမှုရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိထားမိပေမည်။ ရှက်လာပြီကာကွယ်တားဆီးဖို့, သင်မှောင်မိုက်ဘောင်းဘီဝတ်ဆင်နှင့်အိမ်တော်ထဲကသည့်အခါအဝတ်တစ်ဦးအပိုတစ်စုံသယ်နိုင်ဘူး။
ဖက်တီးတစ်ဦးဖက်တီးမစင်ထိုင်ခုံလုပ်ဖို့-ရှိခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီတွေဟာအစာကြေခြင်းနှင့်အစားကဖယ်ရှားပစ်မကိုဆိုလိုသည်။ အလွန်ဖက်တီးဖြစ်ကြောင်းအစားအစာများကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်, သင်သည်အများကြီးအဆီ excreting မှသင်၏ခန္ဓာကိုယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်။
အပျော့စားအသားအရေဒီမှာလူတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသားအရေရှိခြင်းချစ်သောသူ, ဒါပေမယ့်တစ်အသားအရေအဖုဖွံ့ဖြိုးလျှင် rash- ကချွတ်ဖုိ့ရန်စိတ်ကူးများဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးဆုံးက scrubbing မရှိဘဲပျော့ဆပ်ပြာနှင့်သင်၏အသားအရေသန့်ရှင်းရေးဖြစ်ပါတယ်။ Scrubbing နှင့်အောနေတယ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု. ကောင်းသော သာ. အပြစ်ပြုလိမ့်မည်။ သင်သည်မည်သည့်ယားနာသို့မဟုတ်နာကျင်မှုခံစားရလျှင်, သင်အဖုပေါ်တစ်ဦးစိုစွတ်သောအထည်ကိုနေရာချနိုင်ဘူး။ over-the-counter hydrocortisone cream ကိုလည်းသင်ကူညီလိမ့်မယ်။
သို့ပြန်သွားရန်ဤတွင်နာကျင်မှုပြန်သက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့ဘယ်လိုပေါ်အတွေးအခေါ်များဖြစ်ကြောင်း pain-; paining ဖြစ်ကြောင်းသင့်ကျော၏အစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အပူသို့မဟုတ်ရေခဲလျှောက်ထားထိုကဲ့သို့သော naproxen, Ibuprofen, နှင့် Aspirin ကိုအဖြစ်ကိုက်အခဲပျောက်ဆေးယူပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလည်းနာကျင်မှုကိုလျော့ချကူညီပေမယ့်လက်ထဲကရရှိသွားတဲ့လျှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာခြင်းငှါနိုင်ပါတယ်။
တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာတွေ, လည်ချောင်းနာ, ချမ်းတုန်ခြင်း, အဖျားရှိခြင်း။ သငျသညျပြင်းထန်လာပြီမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့နွေးတည်းခိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ, သင်သည်မည်သည့်နာကျင်မှုကိုခံစားလျှင်, သင်ထိုကဲ့သို့သော acetaminophen အဖြစ် over-the-counter ကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
အေးထိုကဲ့သို့သောချောင်းဆိုးအဖြစ်လက္ခဏာတွေ, နှာချေခြင်းနှင့်အိုက် nose- အေးလက္ခဏာတွေတခါတရံ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါသင်စေခြင်းငှါသကဲ့သို့မသက်မသာ, ဒီမှာခံစားမှုနှင့်အတူဆက်ဆံဖို့ကို Hack ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့လည်ချောင်းသက်သာစေသည်, ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောစာရေးရရှိသွားတဲ့နှင့်ရေခန်းခြောက်ရတဲ့အနေဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အရည်တွေအများကြီးကိုသောက်လော့။ သင်တို့သည်လည်းနှာခေါင်းနှာခေါင်းကြောပိတ်ဆို့မှုကိုသက်သာရာအတွက်ကူညီပေးဖို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အေးလက္ခဏာတွေသင့်ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများကိုထိခိုက်လျှင်ဆရာဝန်တစ်ဦး၏အာရုံကိုရှာကြလော့။
သွားဖုံးနှင့်အတူပြဿနာများသို့မဟုတ်သင်မှန်မှန်သင့်ရဲ့သွားတိုက်သင့်ရဲ့သွားဖုံးလိုင်း massage များနှင့်မကြာခဏ mouthwash သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ဤပြဿနာကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် teeth- ။ သငျသညျမုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ၏လေးပုံတပုံလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်အဋ္ဌလက်ဖက်ရည်ဇွန်းဆားနဲ့ပူနွေးတဲ့ရေခွက်ကိုရောစပ်ခြင်းဖြင့်အိမ်မှာသင့်ရဲ့ mouthwash စေနိုင်သည်။
Rectal နာကျင်မှု, ဝမ်းလျှော, အန်, ပျို့ခြင်းနှင့်အစာအိမ် pain- ရက်သို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်ရေဓါတ်ခန်းခြောက်-ကိုရှောင်ကြဉ်ရှောင်ရှားရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအရည်အများကြီးသောက်ပါ။ probiotics အစာစားကြိုးစားပါသော်လည်းဤသင်ကူညီမပါဘူးဆိုရင်, တစ်ဦးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးများ၏အာရုံကိုရှာကြာလော့။
Orlistat, Sibutramine နှင့် Lorcaserin အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
item နှိုင်းယှဉ်လျှင် Orlistat (96829-58-2) Sibutramine (84485-00-7) Lorcaserin(846589-98-8)
လုပ်ဆောင်ချက် Mode ကို Orlistat ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ, Orlistat ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီစားသုံးမှု၏ကာကွယ်တားဆီးရေးမှတဆင့်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်ခန္ဓာကိုယ်ဤအရပ်မှအလေးချိန်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်သိုလှောင်ထားသောအဆီတက်အသုံးပြုသည်။ Lorcaserin တဦးတည်းကြာအစားအစာပမာဏကိုလျော့ကျစေပါတယ်, အရှင်တဦးတည်းခဝါသည်ခံစားရအောင်တို့ကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ serotonin 2C receptors ကိုနှိုးဆွခြင်းဖြင့်ဒီပါဘူး။ Sibutramine ဦးနှောက်အလုပ်အတွက် neurotransmitters လမ်းကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းထားလမ်းကိုပြောင်းလဲဤအရပ်မှ၎င်းတို့၏ reuptake ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ အများအားဖြင့်အစာခြေစနစ်ကဥပမာချောင်မစင်, ပျို့, ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့်အန်ထိခိုက်စေသည်ဟု Orlistat အကြောင်းမရှိဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ။ Lorcaserin သည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်; lymphocypenia Euphoria ပီတိ, ဟေမိုဂလိုဘင်နှင့်တစ်ဦးခေါင်းကိုက်လျော့နည်းသွားသည်။ Sibutramine စိုးရိမ်စိတ်, ရင်ဘတ်နာကျင်မှု, အဖု, ဝက်ခြံ, ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှုခြောက်သွေ့ပါးစပ်ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်အအိပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Lorcaserin တဆယ်နှစ်လုံးကိုလအတွင်း 4.2-5% ကလျော့ကျစေပါတယ်စဉ် Orlistat 5% ဖြင့်လျှော့ချနိုင်သည်စဉ် Sibutramine တစ်နှစ်တစ်ကာလအတွင်း 10% တို့ကသူမြားကိုအလေးချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Orlistat ရလဒ်များကိုထိခိုက်စေသည်ဟုဆိုမူးယစ်ဆေးဝါးများရှိပါသလား
ဤတွင် Orlistat နှင့်အတူအပြန်အလှန်ကြောင်းဆေးများ၏စာရင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။
Alendronate / cholecalciferol (Fosamax Plus အားဃ)
Alogliptin / Metformin ဆေးဟာလည်း (Kazano)
Black က cohosh (သွေးဆုံးပံ့ပိုးမှု)
Cholecalciferol / lactobacillus reuteri (BioGaia Pro ကို Tectis)
Cholecalciferol / သံ polysaccharide (NovaFerrum 125)
Cholecalciferol / genistein / ဇင့် glycinate (Fosteum, VP-GSTN, Fosteum Plus အား)
Cholecalciferol, သွပ် chelazome / genistein
Cholecalciferol / ဖောလစ်အက်ဆစ်
Cholecalciferol (Decara, Replesta, ဗီတာမင် D3, D3)
Canagliflozin / Metformin ဆေးဟာလည်း (Invokamet XR, Invokamet)
ဗီတာမင်ဃ / ကယ်လစီယမ်
Ertugliflozin / Metformin ဆေးဟာလည်း (Segluromet)
Ergocalciferol (Calcidol, Calciferol, Drisdol, ဗီတာမင် D2)
Metformin ဆေးဟာလည်း, empagliflozin
Glyburide / Metformin ဆေးဟာလည်း (Glucovance)
Glipizide / Metformin ဆေးဟာလည်း (Metaglip)
interferon beta ကို-1b (Extavia, Betaseron)
interferon beta ကို-1a (Avonex ကလောင်, Avonex Prefilled ဆေးထိုးအပ်, Rebif Rebidose, Rebif, Avonex)
အင်ဆူလင်ဇင့် (Humilin ဦး) တိုးချဲ့
အင်ဆူလင်ဇင့် (Iletin II ကိုထုတ်ချေးဝက်သား, Iletin ထုတ်ချေး, Novolin L ကို, ထုတ်ချေး Iletin II ကို, Humulin L) ကို
အင်ဆူလင် glargine / lixisenatide
အင်ဆူလင် degludec / liraglutide
အင်ဆူလင် aspart protamine
မော်ဖင်းအကိုက် / naltrexone
Valproic acid ကို
Ubiquinone / ဗီတာမင်အီး
Tolbutamide (Orinase, Tol-Tab ကို)
အရေးကြီးအချက်အလက်mations Orlistat အကြောင်းကို
Orlistat ယူပြီးမီ, သငျသညျအကွောငျးကိုသိရန်လိုအပ်အရေးကြီးသောအသေးစိတ်ကိုရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအသငျသညျကမတည့်လျှင်သင်ဤမူးယစ်ဆေးမသုံးသင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့ကိုလည်းနာတာရှည် malabsorption (ကမှန်ကန်စွာအစားအစာနှင့်အာဟာရစုပ်ယူနိုင်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည်) သို့မဟုတ်မည်သည့်သည်းခြေနှင့်ဆိုင်သောပြဿနာများရှိပါက။ ဘယ်လိုသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် Synephrine HCL လုပ်ငန်းခွင်ပါသလား
သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်သင်၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုပြောပြသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တို့အပေါ်မှာဖြစ်ကြောင်းသင်သည်အတိတ်ကာလကနေခံစားခဲ့ကြရသည်အနာရောဂါနှင့်မည်သည့်ဆေးဝါးနှင့် ပတ်သက်. သူနှင့်အတူဆွေးနွေးခြင်းပါဝင်သည်။ သငျသညျရောဂါ, type ကို 1 သို့မဟုတ်2ဆီးချို, ပန်ကရိယ, gallstones သို့မဟုတ် underactive သိုင်းရွိုက်အစာစားခြင်း, အသည်းရောဂါခံစားခဲ့ရပါတယ်လျှင်တစ်ဦးကဆရာဝန်ကိုသိသင့်ပါတယ်။ သငျသညျမဆိုအခြားကိုယ်အလေးချိန်ဆေးဝါးကိုအသုံးပြုနေကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်ဆရာဝန်ပြောပြရန်တွန့်ဆုတ်မနေသင့်။
အသက်ဆယ်ရှစ်နှစ်ထက်အသက်ငယ်သူကဘယ်သူ့ကိုမှ Orlistat မသုံးသင့်ပါတယ်။ သငျသညျ 18 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလျှင်သတ်မှတ်ထားသောပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တန်ပြန်ကျော်, သင်ဆရာဝန်၏အကြံပေးချက်ကိုရှာခြင်းငှါသင့်ပါတယ်။
Orlistat သာယူရန်အကြံပြုသူတဦးတည်းအားဖြင့်ယူရပါမည်။ ဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့စားရောဂါရှိတယ်အထူးသဖြင့်ပါလျှင်သူတို့အားတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထိုသို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုသင်ဤရှောင်ရှားသလဲ? ဝေးတခြားသူတွေရဲ့လက်လှမ်းမမီကနေထားပါ။
အကောင်းဆုံးကိုအောင်မြင်ရန် Orlistat ရလဒ်များကို သင်တစ်ဦးတည်းကဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကိုမသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်အစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သင့်သည်များနှင့်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစားအစာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားရမည်။ ဒီဆေးကိုယူပြီးနေစဉ်သင်၏ကျန်းမာရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့, သင်လောင်သောမုန့်ညက်၌သင်တို့ကိုအညီအမျှဖြန့်ဝေဘိုဟိုက်ဒရိတ်, ပရိုတိန်းနှင့်အဆီယူကြောင်းအာမခံပါသည်။ ထို့အပြင်တင်းကြပ်စွာသင့်ရဲ့အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလိုက်နာပါ။
သငျသညျအတူတူ Orlistat သူတို့နှင့်အတူယူတစ်ကြိမ်, သင်သည်သင်၏အူနှင့်အစာအိမ်အပေါ်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိခြင်းတက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်လည်းဖက်တီးသောအစားအစာကိုယူပြီးရှောင်ကြဉ်ပါ။
မဆိုကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်နို့တိုက်မိခင် Orlistat ယူဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ ကမမွေးသေးသောသို့မဟုတ်နို့စို့ကလေးလွန်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Orlistat သုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်မတိုင်မီသင်တစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိစမ်းသပ်မှုယူကြောင်းအာမခံပါသည်။ သင်ဤမူးယစ်ဆေးယူပြီးစဉ်ကိုယ်ဝန်ရလိုလျှင်, သင်၏ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးပြောဆိုပါ။ ဒီဆေးဝါးအဖြစ် contraceptives ယူပြီးသူတို့ကိုလျော့နည်းထိရောက်သောစေနေချိန်မှာအပိုသတိထားပါ။
Orlistat သင့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ပေးနေတာဖို့အဆုံးစွန်ဖြေရှင်းနည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Orlistat ရလဒ်များကိုသင်တစ်ဦးသီတင်းပတ်အတွင်းတစ်ဦးထက်ပိုပေါင်ဆုံးရှုံးကူညီရန်သက်သေပြကြပြီ ဒီကျန်းမာတဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကသင်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ယနေ့ကောင်းသောကြည့်ရှုခြင်းနှင့်နောက်ကျောအားလုံးသင့်ရဲ့အလေးချိန်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။ သင့်ရဲ့အစားအစာ Check နှင့်ကျန်းမာစားကြလော့။ သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာချစ်ပ်များနှင့်ချောကလက်တစ်ဘား Munch မှမရှိကြပါဘူး။ သင်အမြဲလာမယ့်နေ့အဘို့အချို့သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ငန်းစဉ်စွဲစေကူညီပေးပါမည်, သင်ကလုပျနိုငျအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းအားကစားရုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသင်တန်းဆရာထားရှိခြင်းသည်သင်၏ခြေချောင်းပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်ကူညီပေးပါမည်။ သူလည်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများအတွက်စံပြလေ့ကျင့်ခန်းနေသောသင်တို့ကိုအကြံပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာတစ်ခုခုကိုအလေးသို့မဟုတ် cardio, စက်ဘီးစီးခြင်းနိုငျသညျ။ သင်အားကစားရုံ၏ပရိတ်သတ်မဟုတ်ခဲ့လျှင်စီးခြင်း, စက်ဘီးစီးခြင်းသို့မဟုတ်ပွေးသည်လည်းသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်နိုင်ဘူး။
Orlistat အနေနဲ့ FDA က၎င်း၏ထိရောက်မှုတို့အတွက်ကျယ်ပြန့်လူသိများဖြစ်သည့်ကိုယ်အလေးချိန်မူးယစ်ဆေးဝါးအတည်ပြုသည်။ အဆိုပါ Orlistat ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်နှစ်အတွက်၎င်းတို့၏စုစုပေါင်းအလေးချိန်ထက်ပို 5% ဆုံးရှုံးကြောင့်သုံးပြီးလူများ၏အများစုနဲ့အတူအဲဒီအကြောင်း volumes ကိုဟောပြောကြ၏။ ယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်ကလည်းသွေးပေါင်ချိန်နှင့်မြင့်မားသောလက်စထရောအဆင့်ကိုများကဲ့သို့အသက်အန္တရာယ်အခြေအနေများရတဲ့၏အန္တရာယ်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်ကတည်းကပေါင်ဆုံးရှုံးကျော်လွန်ပြီ။
သင်ဘယ်မှာကသင့်ရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်အပေါ်မပဉ္စလက်တွေ့ကြုံခံစားဖို့ Orlistat ဝယ်ဖို့အံ့သြစေခြင်းငှါ။ Phcoker.com မှာ, ငါတို့သည်အဘယ်သူ၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ညှိမဟုတ်ပါဘူး Orlistat ရောင်း။ အဆိုပါ Orlistat စျေးနှုန်း တတ်နိုင်, ငါတို့သည်သင်ဖြုန်းတိုင်းခေါများအတွက်တန်ဖိုးကိုရရှိမည်သောသင်အာမခံနိုင်ပါ။ ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအမိန့်နေရာယူသင်ပြုတယ်အားလုံး, သင့်အသေးစိတျထဲမှာဖြည့်ပါမေးခွန်းလွှာနှင့်သင့်အမိန့်များ၏ခွင့်ပြုချက်စောင့်ဆိုင်းဖြစ်ပါသည်, သင်၏အချိန်အများကြီးယူမထားဘူး။ သင်ကငွေပေးချေမှုကိုဖန်ဆင်းပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့မူးယစ်စေလွှတ်ပါလိမ့်မယ်, သင်ကသင့်ရဲ့တည်နေရာကိုရရှိရန်ကြာမည်မဟုတ်ကြောင်းသေချာစေနိုင်ပါတယ်။
အလေးချိန်အစာရှောင်ဆုံးရှုံးရှုပ်ထွေးခံရဖို့မရှိပါ။ ယနေ့ Orlistat Buy, သင့်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်မှာဆေးပြား pop နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုကြည့်သိသိသာသာလျှော့ချပေးပါတယ်။
Armand ခ Christophe, Stephanie R. De Vriese, Stephanie DeVriese, စာမျက်နှာ 426- 437 တည်းဖြတ်အဆီအစာခြေခြင်းနှင့်စုပ်ယူ။
အဝလွန်ခြင်းသုတေသနအတွက်တိုးတက်ရေးပါတီ: Geraldo Madeiros-Neto တည်းဖြတ် 9, Alfredo Halpern, Claude Bouchard က, စာမျက်နှာ 1046 ။
မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှု-အားဖြင့်ဖြစ်သူ Colin Waine နစ်ခ် Bosanquet, စာမျက်နှာ 68-71 အတွက်အဝလွန်ခြင်းနှင့်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံရရှိပါသလား from2325214cv